Xildhibaan Faarax Shiikh Cabdulqaadir » Know Your MPs (Test Page) – Kalfadhi
Xildhibaan Faarax Shiikh Cabdulqaadir » Know Your MPs (Test Page)
Xildhibaan Faarax Shiikh Cabdulqaadir
Xildhibaan Golaha Shacabka waxuu ku dhashay magaalada Beledweyne sanadkii 1966-dii Deegaan-doorashadiisu waa Koonfur Galbeed Bishii Novermbar sanadkii 2016-kii ayaa lagu doortay Jowhar Laba jeer ayuu xildhibaan noqday, wuxuuna aad ugu caan baxay ka shaqeynta arrimaha gargaarka iyo waxbarashada home
Xildhibaan Faarax wuxuu Ku dhashay magaalada Beledweyne oo ah caasimadda gobolka hiiraan sanadkii 1966-dii, wuxuuna dugsiga quraanka Ku dhigtay isla magaalada asagoo quraanka ka bartay dugsi ay lahaayen qoyskiisa.
Dugsiga hoose Wuxuu Ku dhigtay Muqdisho dugsigii hoose ee Howlwadaag, wuxuuna Ku laabtay magaalada Beledweyne 1976-dii si uu u dhammeysto waxbarashadii asaasiga aheyd wuxuuna dugsi dhexe dhigtay iskuulkii Sandhool Guure.Halka Sara-na sanadkii 1983-dii kaga baxay Dugsigii Sare ee Axmad Warsame ee isla magaalada Beledweyne.
Halkan ka daawo: muuqaal laga duubay xildhibaan Faarax 26-kii bishii 2-Febraayo sanadkii 2001-dii.
Hormarinta wax soo saarka beeraha 1998
Waa muuqaal xusuus leh 19 sanno ka hor hormarinta beerraleeyda iyo sare u qaadidda wax soo saar ka Gobolka Shabeelada hoose iyo dhiiri galinta qodotada.~ Goobahu waa, Sablaale iyo Qoryooleey
Posted by Farah Sheikh Abdulkadir on Friday, December 30, 2016
Xildhibaan Faarax Wuxuu ka mid ahaa dhallinyaradii Soomaaliyeed ee ka qeyb qaatay shaqooyinkii qaranka gaar ahaan kuwii ugu horreeyey ee loo yaqaaney “ gurmadka mashaariicda hormarinta qaranka “ waxaana howllo loogu direy gobollada dalka gaar ahaan degmada Xarardheere ee gobolka Mudug sanadkii 1984-dii .
Intaas kaddib, waxbarasho heer jaamacadeed ayuu u aaday dalka Pakistan gaar ahaan magaalada Islamabad sanadkii 1987-dii, asagoo ka billaabay heerka koowaad ee jaamacadda International Islamic University wuxuuna heerka koowaad ee jaamacadda dhigtay kulliyadda sharciga iyo qaanuunka , kadib wuxuu isla jaamacadda ka bilaabay heerkii labaad in kastoo uusan dhammeysan.
Mar danbe ayay u suurtagashay inuu diyaarsho heerka labaad wuxuu ka diyaariyey Maamulka iyo Maareynta ganacsiga, isagoona ka kala diyaarshay laba machad oo kala ah a) Maastricht Institute oo ku yaalla dalka Holland iyo Eastern and Southern African Management Institute (ESAMI) oo dalka Tanzania ah.
Halkaan ka daawo: Muuqaal xildhibaan Faarax laga duubay 14-kii bishii Meey sanadkii 1998-dii.
Xildhibaan Faarax Wuxuu ka shaqeeyey oo uu caan ku noqday arrimaha bani’aadnnimada iyo waxbarashada. Isagoo guddoomiye ka ahaa hay’addii African Muslim Agency (AMA).
Halkaan ka daawo muuqaal Xildibaan Faarax Shiikh C/qaadir laga duubay 25-kii bishii 1999-kii.
Hadii aan 20 sanno ka hor ka fikireynay mustaqbal ka umadeena sida uu u keen karo marka maamul dowladnimo la helo iyo heer ka aqooneed maanta ee dhalinyaradeena leedahay waxaa ii muuqaneyso rajo ah Midnimo, Hormar, dowladnimo, iskaashi, iyo wada shaqeyn u baahan karti, iyo hufnaan wadaninimo ah. Mahadsanidiin.
Posted by Farah Sheikh Abdulkadir on Friday, January 13, 2017
Laga soo billaabo 1992-dii arrimaha gargaarka bin’aadinnimo ayuu xildhibaan Faarax aad uga shaqeeyay; xilligaas dalka waxaa ka jiray macluul daran iyo dagaallo sokeeye. Ka gadaalna arrimaha hormarinta waxbarashada ayuu aad uga shaqeeyay asagoo ka qeyb ka qaatay aasaaska iskuulo badan oo laga hirgaliyay magaalooyinka , Muqdisho, Beledweyne, Hargeysa, kismaayo, iyo kuwo kale.
Waxaa u suurtagashay asaga iyo kooxdii uu la shaqeeynayey iney aasaasaan dalladii waxbarasho ee ugu horreysay ee dalka ka kadib burburkii waxeyna aheyd Dallada Waxbarashada Ahliga ah Ee FPENS.
Sidoo kale xildhibaan Faarax Sheikh Cabduqaaldir waxa uu kaalin fiican kulahaa aasaaskii Jaamacadda SIMAD.
Xildhibaan Faarax wuxuu Ku soo biiray siyaasadda sanadkii 2010-kii , asagoo xilligaa Ku biirey Xisbiga nabadda iyo hormarka (PDP) oo uu xubin ka ahaa, kaasoo uu guddomiye u ahaa Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud .
20-kii Agoosto 2012-kii waa markii ugu horreysay ee xildhiaan Faarax Shiikh C/qaadir loo doorto kursiga matalaadda shacabka ee Baarlamaankii 9-aad. Guddigii maaliyadda ee Baarlamaankii isla baarlamaankaas ayuuna ka mid ahaa.
Wasiiru dowlaha madaxtooyada ayuu soo noqday xukuumaddii Cabdi Shirdoon “ Saacid “ wuxuuna xilkaas hayey muddo laba sano ah.
Xukuumaddii ku xigtay ee Raysul wasaare Cabdiwali Sh Axmad Maxamad ayuu sidoo kale ka noqday wasiirkii Cadaaladda iyo Dastuurka wuxuuna xilkaas hayey muddo sanad ah.
Wixii xilligaa ka danbeeyey waxa uu ka tirsanaa baarlamaankii 9-aad.
Bishii Novermbar sanadkii 2016-kii ayaa mar kale loo doortay in uu ka mid mid noqo Baarlamaanka 10-aad, wuxuuna ka tirsanyahay haatan guddiga garsoorka iyo arrimaha diinta ee Golaha shacabka.